Ma ogtahay in Google uu keydiyo macluumaadkaaga? - BBC News Somali
"Marka aad adeegga Google isticmaaleyso, waxaad nagu aamintay macluumaadkaaga."
Balse waxa aadan garan karin waa in Google ay ku siineyso fursad aan ku tirto macluumaadkaaga ku keydsan qeybta "my activity" oo keydisa waxa aad ka dhex sameyso barta.
Google oo Hindiya ka samaynaysa wi-fi internet oo lacag la'aan ah
Akhbaarta oo dhan waxaa lagu keydinayaa qeybta loo garanayo "dhaqdhaqaaqeyga" - waana halka aad u baahan tahay in aad isha ku hayso.
Lahaanshaha sawirka Captura de pantalla
"Fursadda ugu wayn ee kuu furan" waa in aad tirto dhammaan waxkastoo aad eegto "xilli kaste".
Balse tani xitaa si fudud ayaad uga feejignaan kartaa. Marka hore guji "history" oo ah meesha keydka oo dhanka bidix ah. Ka dib guji "nadiifi dhammaan wixii aan baaray", ama waxaad si gaar ah u raadin kartaa waxyaabaha qaar ee si gaar ah aad u daawatay.
Laakiin haka walwalin - waxaad ogaan kartaa macluumaadkaaga loo gudbiyay kuwa xayeysiinta sameeya.
Sida aad u tirto, fur cinwaankaaga Google ka dibna gal meesha ay ku qoran tahay "Personal info & privacy" ee akhbaartaada gaarka ah keydisa.
Lahaanshaha sawirka Google - Mark Shea
Markan waxaa sii gujisaa qeybta ah "Ads Settings". ka dibna sii gal "Manage ads settings" oo fursad kuu siineyso in aad iska xirto.
Ka dib waxaad arki doontaa meel ay ku qoran tahay "Ads personalisation". haddii aad iska xirto halkaasi, laguma so gaarsiin doono xayeysiismo la xiriira waxa aad ka baareyso ama macluumaadka kale ee Google ay kaa hayso.
Google oo balaayiin doolar lagu ganaaxay
Qalad ka dhacay Google oo Japan saameeyay
Google oo lagu dacweeyay in uu mushaarka ugu kala xagliyo ragga iyo dumarka